🥇 ▷ Kalluumaysiga adduunka ee loo yaqaan "Fishing Sim World": ✅
Kalluumaysiga adduunka ee loo yaqaan “Fishing Sim World”:
Ciyaarta ayaan soo bandhignay Kalluumeysiga Sim World Hubaal Xbox One, dhowr bilood ka hor. Waad ka heli kartaa baaritaankeena hoose. Cusboonaysiinta ugu dambaysa, waddankeenna quruxda badan ayaa hadda si fiican loogu matalay ciyaarta.
Tijaabad – Kalluumeysiga Sim World, waa khibradda kalluumeysiga ee ugu macquulsan
Kalluumeysiga Sim World ee dalka farmaajo
Sidaa darteed Faransiiska ayaa ka soo muuqday muuqaaladan kalluumeysiga, oo caan ku ah hiwaayadaha. Ciyaaraha Dovetail ayaa hadda soo dhejiyay cusbooneysiin ku saabsan kulankiisa Cayaaraha 4, Xbox One iyo PC. Kadib markii ay u diyaariyeen ciyaartoy dhowr goobood oo kalluumeysi gaar ah oo adduunka ah. Kalluumeysiga Sim World wuxuu imaanayaa Faransiiska mid kamid ah harada ugu quruxda badan wadankeena, Harada Gigantica ee Saint-Christophe-Dodinicourt.
Kalluumeysatada kalluumeysiga ayaa aad u yaqaannaan bartaan, waxaa lagu yaqaanaa inay ka mid tahay balliyada ugu weyn ee karbaashka ah. Miyiga Auboise, haradaan waxay ka badan tahay 10 hektar. Kalluumaysatada adiga kugu jirta ayaa la khiyaanayn doonaa. Waxaa jira 50 kalluun oo koob ah si loo ogaado. Kalluunka ayaa miisaankiisu noqon karaa 27 kiilo. Tiro farabadan iyo ku dhawaad ​​900 oo carp ah ayaa ku sugaya. Marka la soo koobo, caajis ma noqon doontid.
Faahfaahin, kuwa aan wali haysan ciyaarta. Waxaa laga heli karaa 19,99 € hubi Amazon. Cusboonaysiinta waxaa laga heli karaa ilaa 10 € oo ku saabsan Steam, Xbox Live ama aaladaha PS Store.
Waxaad ka ogaan kartaa hoosta, trailer of cusboonaysiinta.
Kalluumeysiga Sim World | Xbox One – Ciyaar Koodh ah oo La Soo Dejiyo
Kalluumeysiga Sim World waa jilitaan macquul ah oo kaa dhigaya inaad u safarto waayo-aragnimada kalluumeysiga ee aan horay loo arag.
Dareem u deg degida adrenaline markaad qabsato baararka waaweyn, pike ama carp!